Waa maxay diinta saxda ii ah aniga aniga?
Maqaayadaha cuntada ugu horeysa waxay nagu qasbeen iyagoo noo ogolaanayo in aan dalbano cuntada sida saxda ah qaabka aan u rabno. Qaar ka mid ah maqaayadaha kafeega waxay ku faanaan in kabadan boqolaal dhadhan iyo noocyo kala duwan oo kafee ah. Xitaa markaad iibsaneysid guryo iyo baabuur, waxaan hal ku eegi karnaa dhammaan talaabooyika iyo muuqaalada aan go’aansano. Mar dambe kuma noolin jokolaato, faniila, iyo aduun istarowberi ah. Dooqa waa boqorka! Waad heli kari wax walba oo aad rabtid sida waafaqsan sida shaqsigaaga gaarka ah iyo baahida.
Ka waran diin oo adiga sax kuu ah? Ka waran diin dambi xor ka ah, waxba kaama rabto, iyo culeys kuma ah waxyaabo badan oo ku dhibayo ee ah sameey iyo hasameynin? Waa taas, sida aan kuu sheegay. Laakin diinta ma wax loo doortaa sida dooq dhadhan jaceel oo jalaato?
Waxaa jiro codad badan oo ku tartamaya dareenkeena, marka maxaa uu qofna u tixgeliyaa in ciise uu koreeyo, waxaa dhahay, Muhammad ama Confucius, Buddha, ama Charles Taze Russell, ama Joseph Smith? Waxaas oo dhan ka dib, wadooyinkaas oo dhan miyaysan kuu hogaamin Janada? Diimanka oo dhan miyaysan asal ahaan isku mid aheen? Runta waa mida diimanka oo dhan kuuma hogaamiyaan Janada, sida wadooyinka oo dhan kuma geeyaan Indiana.
Ciise kaligiisa wuxuu la hadlay maamulka Ilaahey sababtoo ah Ciise kaligiisa ayaa dhimashada ka guuleystay. Muhammad, Confucius, iyo kuwa kale qabrigooda ayay cara ku noqdeen ilaa maalintaan. Laakin Ciise, Awoodiisa kaligeed, wuu ka soo baxay iilka sedex maalmood ka dib dhimashada ee naxariis darada istilaabka Roman. Qof walba ee awood ku leh dhinaca dhimashada wuxuu naga mudanyahay digniinteena. Qof walba ee awood ku leh dhinaca dhimashada wuxuu naga mudanyahay in la maqlo.
Cadeynta taageereyso soo noolaanshaha Ciise waa mid aad u weyn. Marka koowaad, waxaa jiray in kabadan shan boqol oo marqaati ee soo kicitaanka Ciisi! Taasi waa marqaati badan. Shan boqol oo cod layskama indho tiri karo. Waxaa sidoo kale jira xaalad iilka oo ebar ah. Cadawga Ciise wuxuu si sahlan ku joojin kareen hadalada oo dhan ee soo noolaanshaha iyagoo bandhigayo Dhimashdiisa, jirka dhagaxoobay, laakin meesha ma ku jirin jir dhintay oo iyaga ay soo bandhigaan! Iilka wuxuu ahaa eber! Raaciyayaasha malaga yaabaa in ay xadeen jirkiisa? Way adagtahay. Si looga hortago xaalad noocaas in ay dhacdo, iilka Ciise waxaa si xoogan u ilaalinayaya ciidamo hubeysan. Iyadoo la tixgalinayo raaciyaashiisa ku dhaw waxay la qaxeen cabsi oo Xiritaankiisa iyo Dilkiisa, waxay badanaa u dhaweyd kala baxa ururkaan ee kaluumeysatada cabsiyeysan waxay u aadi lahaayeen waji ka waji ee ka soo horjeeda, ciidamada xirfadlayaassha. Mana u uhuri laheyn noloshooda iyo noqdaan shahiidyaal— sida iyaga badankooda—usameeyeen qiyaano. Runta uga sahlan ayaa ah soo noolaanshaha Ciise si kale looma sharaxi karo!
Markale, qof walba oo awood ku leh dhinaca dhimashada wuxuu istaahilaa in la maqlo. Ciise wuxuu u cadeeyay Awoodiisa dhinaca dhimashada; sidaas darteed, waxaan u baahannahay in aan maqalno waxa uu dhahay Isaga. Ciise wuxuu sheegtay in uu yahay waddada kaliya ee badbaadada (Yooxanaa 14:6). Isaga ma ahan waddada; Isaga ma ahan hal kamid ah waddooyin badan. Ciise waa waddada.
Iyo isla Ciisahaan swuxuu yiri, “Ii imaada dhammaantiin kuwa shaqeeya iyo si xoogan culeys u saaranyahay, iyo waxaan ku siinayaa nasiinyo" (Matayos 11:28). Tani waa aduun adag iyo nolosha way adagtahay. Inaga badankeen aad ayaan u dhiigeysannahay, dhaawacannahay, iyo dagaalka ka baqayo. Ogolaaday? Marka maxaad rabtaa? Soo celinta ama diintooda kaliya? Badbaadaha nool ama midka mid ah dhimashooyin badan"? Xiriir micno weyn leh ama cibaadeysa ebar ah? Ciise dooqa ma ahan—Isaga ayaa dooqa ah!
Ciise waa “diinta”saxda ah haddii aad raadineysid dambi dhaaf (Falimaha Rasuulaha 10:43). Ciise waa “diinta”saxda ah haddii aad raadineysid xiriir micno buuxa in aad la yeelatid Ilaahey (Yooxanaa 10:10). Ciise waa “diinta”saxda ah haddii aad ka raadineysid guri daa’in Janada (Yooxanaa 3:16). Aaminkaaga saaro Ciise Masiixi sida Badbaadiyahaaga; maka shalayneysid! Isaga aamin ee cafiska dambiyadaada; ma ku qasaareysid.
Haddii aad rabtid in aad la yeelatid “xiriir sax ah”Ilaahey, halkaan tusaalaha docoda. Xasuuso, adigoo dhahayo docodaan ama doco walba oo kale kuma badbaadineyso. Kaliya waa aaminaada Masiixiga ee kaa badbaadin kara dambiga. Docodaan waxay si fudud uga fogtahay waddada loogu muujinayo Ilaahey rumeyntaada Isaga iyo u mahadceli Isaga oo badbaadintaada ah. “Ilaahayow, waan ogahay in aan dambi kaa galay iyo waxaan istaahilaa ciqaab. Laakin Ciise Masiixi ayaa dambiga aan istaahilay qaatay si markaas dhinaca rumeyntiisa iyadoon ku jirto layga cafin karo. Aaminaadeyda adiga ayaan kugu meeleeyay ee badbaado ah. Waad ku mahadsantahay naxariistaada cajiibka ah iyo cafiskaaga—naxariista nolosha daa’inka! Aamiin!"